China Green Chai Chao Qing fekitari uye vagadziri | Yibin Tea
Hunhu hunhu hwakasimba uye hwakaonda, ruvara rwakasvibira uye rwakanyorova, hwema hwacho hwakareba uye hunogara, hwakatsetseka, hwema hwacho hwakatsva uye hwakapfava, kuravira kwakapfuma, muto wesobho, pasi peshizha yero uye inopenya.
Fried green tea inoreva mashandiro ekuomesa mashizha eti muhari nekushandisa kamoto mudiki mukugadzira mashizha eti. Kubudikidza nekuumburuka kwechakanaka, mvura iri mumashizha tii inopwa nekukurumidza, ichivharisa nzira yekuvirisa yemashizha eti, uye ichiita kuti musvinwa wetii unyatso chengetwa. Yakabikwa girini tii ihombe kusvetuka munhoroondo yetii.
Yakareba, yakatenderera, yakati sandara
kutsva, kushaya simba uye kupenya
inozorodza, ine huswa uye inoninipisa
Fried green tea nekuda kweiyo green tea kuomesa nzira inoshandiswa kufryer zita. Zvinoenderana nechitarisiko chavo, vanogona kukamurwa muzvikamu zvitatu: girisi rakareba rakaomeswa, rakakomberedzwa rakasvibira girini uye rakatsetseka rakasvibira girini. Yakareba yakabikwa girini inoratidzika kunge tsiye, inozivikanwawo seye tsiye yetsi. Round yakakangwa yakasvibirira chimiro senge zvidimbu, inozivikanwawo separera tii. Flat yakakangwa girini tii inonziwo gorofa tii. Iyo yakareba yakakangwa yakasvibirira mhando inoonekwa neakasunga banga, ruvara rwegirini, kunhuwirira uye kusingaperi, kuravira kwakapfuma, muto wemuto, yero pazasi pemashizha. Girini yakagochwa yakatenderera uye yakasunga kunge bheji mune chimiro, inonhuwirira uye yakasimba mukuravira, uye inopokana nefuro.
Chigadzirwa chakabikwa chakasvibirira chakatsetseka uye chakatsetseka, chinonhuwirira uye chinonaka, senge West Lake Longjing. Mukutengeserana kwekutarisa kweye tsiye tii mhando, zviri pamutemo tii chaiyo standard sampuro inowanzo shandiswa sehwaro hwekuenzanisa, kazhinji ichishandisa yakakwira kupfuura muyero, "yakaderera", "yakaenzana" mamakisi matatu emitengo
Hunhu hwehunhu ndehwokuti: tambo yakasungwa uye inotsvedzerera, iro doro doro rakasvibira, pasi pashizha pane girini, kunhuhwirira kuri kutsva uye kwakapinza, kuravira kwacho kwakasimba uye kusangana kwakapfuma, uye kuramba kwekubika kwakanaka.
Mhando huru dzediki yakasvinwa tiii ndeyeTsiye, Pearl Tea, West Lake Longjing, Lao Zhu Dafang, Biluochun, Mengding Ganlu, Duyun Maojian, Xinyang Maojian, Wuzi Xianhao zvichingodaro.
Yakabikwa girini tii kupatsanura
Green tii yakareba uye inomhanyisa-yakabikwa
Nekuda kwemhedzisiro dzakasiyana dzeanogadzira kana echinyorwa mashandiro mukuomesa maitiro, cheng tii yakaumba maumbirwo akasiyana senge strip, denderedzwa bead, fan fan, tsono uye sikuru, nezvimwe zvinoenderana nechitarisiko chavo, cheng tii inogona kukamurwa kuita matatu marudzi : rakareba rakakangwa girini, rakakomberedzwa rakasvibira girini uye rakatsetseka rakakangwa girini. Yakareba yakabikwa girini inoratidzika kunge tsiye, inozivikanwawo seye tsiye yetsi. Dhizaini uye ruvara rwezvakapedzwa zvigadzirwa ndiJane tsiye, Gongxi, Yucha, Tsono yetsono, Xiu eye uye zvichingodaro, imwe neimwe iine hunhu hwakasiyana. Jane eyebrow: iyo tambo yakatetepa uye yakatwasuka kana chimiro chayo chakaita kungeyeye rakanaka remukadzi, ruvara rwakasvibira uye rwunotonhora, kunhuwirira kuri kutsva uye kutsva, kuravira kwakakora uye kunotonhorera, muto wesobho, pasi pemashizha girini uye yero uye inopenya; Gongxi: Ndiyo tii inotenderera mune yakasvibira yakasvibira girini. Inonzi Gongxi mushure mekuchenesa. Chimiro chidimbu chakafanana nebhedi tii, iyo yakatenderera shizha pasi ichiri nyoro uye kunyangwe; Mvura tii: pakutanga tii yakareba-yakasarudzika yakaparadzaniswa naPearl tii, asi ikozvino yakawanda yeMvura tii inowanikwa kubva kuIye eye eye. Chimiro chayo ipfupi uye yakatetepa, ichakatetepa, iine ruvara rwegirini, hwema hwakachena uye kuravira kwakasimba. Ruvara rwedoro rwakaita yero uye girini, uye mashizha achiri nyoro uye kunyange. Iyo yakareba yakakangwa yakasvibirira mhando inoonekwa neakasunga banga, ruvara rwegirini, kunhuwirira uye kusingaperi, kuravira kwakapfuma, muto wemuto, yero pazasi pemashizha.
Green tii yakatenderera uye inomhanyisa-yakabikwa
Chitarisiko senge zvidimbu, inozivikanwawo separera tii. Chimiro chezvidimbu chakatenderera uye chakasimba. Nekuda kwenzvimbo dzakasiyana dzekugadzira uye nzira, inogona kukamurwa kuita Pingchaoqing, Quanggang Hui Bai uye Yongxi Huoqing, nezvimwewo Pingqing: inogadzirwa mu shengxian, xinchang, shangyu uye mamwe mataundi. Iyo yakanatswa uye yakaparadzirwa tei tii yakaiswa muPingshui Guta reShaoxing munhoroondo. Chimiro cheiyo yapedzwa tii yakanaka, yakatenderera uye yakasungwa pfumo semaparera, saka inonzi "Pingshui Pearl Tea" kana Pinggreen, nepo iyo tii yemvere inonzi Pingfried Green. Girini yakagochwa yakatenderera uye yakasunga kunge bheji mune chimiro, inonhuwirira uye yakasimba mukuravira, uye inopokana nefuro.
Yakabikwa girini tii yakapetwa yakagochwa girini tii
Chigadzirwa chakapedzwa chakatsetseka uye chakatsetseka, chinonhuwirira uye chinonaka. Nekuda kwemusiyano wekuburitsa nzvimbo uye nzira yekugadzira, inonyanyo kuve yakakamurwa kuita matatu marudzi: Longjing, Qiqiang uye Dafang. Longjing: yakagadzirwa muHangzhou West Lake District, inozivikanwawo seWest Lake Longjing. Mashizha matsva achinhonga zvinyoro nyoro, izvo zvinodikanwa yunifomu bhudhi mashizha mumaruva, mukuru Longjing mashandiro ari kunyanya akajeka, aine "girini, inonhuwirira. Hunhu hunhu hwekutapira kwekutapira uye chimiro chakanaka. Mureza pfuti: inogadzirwa mu hangzhou longjing tii nharaunda yakatenderedza uye iri padhuze. Yuhang, fuyang, xiaoshan uye mamwe matunhu.Ane rupo: inogadzirwa mu she county, anhui province uye zhejiang Lin an, chun in the near area, with she county old bamboo rupo ndiyo inonyanya kuzivikanwa.
Yakabikwa green tii kumwe kusarudzika
Yakatetepa uye yakapfava yakasvibira tii inoreva iyo yakagochwa girini tii yakagadzirwa kubva mukugadziriswa kwemafuta akanaka emashizha nemashizha. Icho chikamu chikuru cheakasarudzika tii tii, uye kazhinji ndeyenhoroondo tii. Yese yakasvikwa girini tii inogadzirwa nekutanha yakanaka yetete bhudzi nemashizha ndeyeti nyoro yakagochwa girini tii. Inodanwawo kunzi yakakangwa girini tii nekuda kwegoho rayo diki, rakasarudzika mhando uye zvisingawanzo zvinhu. West Lake Longjing uye Biluochun ese ari maviri nyoro uye anomutsa-akaomeswa girini tii.
Yakabikwa girini tii kugadzira maitiro
Mhedziso yeFried Green Tea
Kugadzirwa kwetii yeChina, ine green tii yekutanga. Kubva paTang Dynasty, China yakatora nzira yekupisa tii, ndokuzoshanduka kuita steam green yakasununguka tii muRwiyo Dynasty. MuMing Dynasty, China yakagadzira nzira yekutsvaira girini, uye zvobva zvabvisa zvishoma nezvishoma kupisa girini.
Parizvino, maitiro ekugadzirisa tii girini anoshandiswa munyika medu ndeaya: mashizha matsva - kurapa, kuumburuka uye ③ kuomesa
Fried green tea yapera
Green kupedzisa ndiyo kiyi yehunyanzvi chiyero chekuumba mhando ye green green. Chinangwa chayo chikuru ndechekuparadza zvachose chiitiko chema enzymes mumashizha matsva uye kumisa iyo enzymatic oxidation ye polyphenols, kuti uwane ruvara, kunhuwirira uye kuravira kweti yakasvibira. Chechipiri kutumira gasi rehuswa, kusimudzirwa kwekunhuhwirira kwetii; Chechitatu kusviba chikamu chemvura, kuitira kuti ive nyoro, inowedzera kuomarara, nyore kupumbuka ichiumba. Mushure mokunge mashizha matsva atanhwa, anofanira kupararira pasi kwemaawa maviri kusvika matatu, uyezve anofanira kunge apera. Degreening musimboti wekutanga "tembiricha yakakwira, yekutanga yakakwira mushure yakaderera", kuitira kuti tembiricha yehari kana roller kusvika pa180 ℃ kana yakakwira, kuti ikurumidze kuparadza zviitiko zvema enzymes, uye zvobva zvaderedza zvakakodzera tembiricha, kuitira kuti bundu tip uye shizha pamupendero haafaniri kuti zvakakangwa, kukanganisa kunaka girini tii, kuuraya zvakaenzana uye kwazvo, tsaru uye kwete koka, nyoro uye kwete mbishi chinangwa. Musimboti wechipiri wekupedzisa kugona kugona "kuuraya mashizha ekare zvishoma, madiki mashizha ekare kuuraya". Iyo inonzi yekare kuuraya, ndeyekurasa yakawanda mvura yakakodzera; Iko kunonzi kuuraya nyoro, ndiko kurasikirwa kwakakodzera kwemvura kushoma. Nekuti iyo enzyme catalysis mumashizha madiki yakasimba uye iyo yemvura yakakwira, saka mashizha ekare anofanirwa kuurawa. Kana iwo madiki mashizha akaurayiwa, iko kushandiswa kweiyo enzyme hakuna kuparadzwa zvachose kuti ibudise tsvuku tsvuku uye matsvuku mashizha. Izvo zvemukati zvemashizha zvakanyanyisa, iyo mvura iri nyore kurasikirwa kana ichitenderera, uye zviri nyore kuve mushy kana uchimanikidza, uye mabhureki nemashizha zviri nyore kutyora. Pane kupesana, mashizha mashoma akasakara anofanirwa kuurayiwa nyoro, mashizha akasakara ane mvura shoma, yakakwira cellulose zvemukati, mashizha akaomarara uye akaomarara, senge kuuraya mashizha egirini aine zvemvura mashoma, anonetsa kuumbika kana achikunguruka, uye nyore kuputsa paunenge uchimanikidza. Zviratidzo zvine mwero zvemashizha egirini ndeaya: ruvara rwemashizha runochinja kubva pane girini yakajeka kusvika pagirinhi rakasviba, risina tsvuku nemashizha, mashizha acho akapfava uye anonamira zvishoma, iwo matete emidziyo uye madzinde akapetwa nguva dzose, mashizha acho anonamira zvakasimba mukati boka, rakasununguka zvishoma, gasi rehuswa rinonyangarika, uye kunhuhwirira kwetii kunoratidzwa.
Kurudzira - fry girini tii
Chinangwa chekuumburuka ndechekudzora vhoriyamu, nekuisa hwaro hwakanaka hwekutsvaira uye kugadzira, uye nekuparadza iwo mavara enyama nenzira kwayo, kuti muto wetii ive nyore kubika uye kusagadzikana pakubika.
Kukanya kunowanzopatsanurwa kuita kukanya kupisa uye kukanya kutonhora, kunonzi kukanya kupisa, kuuraya mashizha egirini pasina kuunganidzwa uchitsva kukanya; Iko kunonzi kukanya kutonhora, kuuraya mashizha egirini kunze kwehari, mushure menguva yekupararira, kuitira kuti tembiricha yemashizha idonhe kune imwe nhanho yekukanya. Mashizha ekare ane huwandu hwakawanda hwecellulose, uye hazvisi nyore kuve zvipenga kana uchikunguruka, uye zviri nyore kushandisa kukanya kunopisa. Yepamberi nyoro mashizha ari nyore kupeta kuita mitsetse, kuitira kuti urambe uine ruvara rwakanaka uye hwema, kushandiswa kwechando kukanya.
Parizvino, pamusoro pekugadzirwa kweLongjing, Biluochun uye imwe yakaitwa nemaoko tii, huwandu hwakawanda hwetii hunokungurutswa nemuchina unotenderera. Ndokunge, isa mashizha matsva mumudziyo wekukanyira, kufukidza iro rinovhara muchina, uye wedzera kumanikidza kwekuumburuka. Nheyo yekumanikidza "yakajeka, inorema, yakajeka". Ndiko kuti unyoro nyatso tanga, wobva wawedzera zvishoma nezvishoma, uye wozononoka kudzikisa, chikamu chekupedzisira chekumanikidza uye kukanya kwemaminitsi mashanu. Iyo yekuparadza mwero wekutenderera mashizha maseru kazhinji iri 45-55%, uye muto wetii unonamatira kune iro shizha pamusoro, uye ruoko rwunonzwa kugadzirwa uye kunamira.
Fried green tea kuti iome
Kune nzira dzakawanda dzekuomesa, dzimwe dziine dryer kana dryer kuomesa, imwe ine hari fry yakaoma, imwe ine rolling barrel fry yakaoma, asi zvisinei kuti ndeipi nzira, chinangwa ndechekuti: imwe, mashizha pahwaro hwekupedzisa ramba uchiita shanduko mune zvirimo, kunatsiridza yemukati mhando; Chechipiri, pahwaro hwekuumburudza kupedzisa tambo, kunatsiridza chimiro; Tatu, bvisa hunyoro hwakanyanya, kudzivirira chakuvhe, nyore kuchengeta. Chekupedzisira, mushure mekuomesa, mashizha tii anofanirwa kusangana nemamiriro ekuchengetedza akachengetedzeka, ndokuti, hunyoro hunodiwa kuve mu5-6%, uye mashizha anogona kutyorwa kuita zvidimbu nemaoko.
Kudzokorora kweiyo yakasvibira green tii
Yakareba yakabikwa girini mushure mekuchenesa tii yetsiye. Pakati pavo, Jane tsiye chimiro chakasunga banga, ruvara rwegirini rinosimbisa chando, muto weyero girini yakasvibira inopenya, chestnut kunhuhwirira, kuravira kwakapfava, yero uye girini pazasi mashizha, senge chimiro chebhuruu, grey, kunhuhwirira hakuna kuchena, utsi char inotevera faira zvigadzirwa.
(1) Muenzaniso wakasarudzika wetiye yetsi yekutengesa kunze inogona kukamurwa kuita: Tezhen, Zhenmei, Xiu Mei, Yucha neGongxi. Ona tafura yezvimwe dhizaini uye mhando. Hunhu hunodikanwa hwemavara ega ega: hwakajairika mhando, hapana kupenda, hapana kuwedzerwa kwe chero kunhuhwirira kana kuravira zvinhu, hapana kunhuhwirira kunoshamisa, uye hapana isiri-tiyi inclusions.
(2) eyebrow tii yekukanda musimboti Kutarisisa kweye tsiye mhando tii, kazhinji kushandisa zviri pamutemo tii yemuviri standard sampuro sehwaro hwekufananidza, inowanzo shandiswa pane yakajairwa "yakakwira", "yakaderera", "yakaenzana" mamakisi matatu emitengo. Kuiswa kwetsiye yetsi kwakaitwa maererano netafura, ichitora Tezhen Giredhi 1 semuenzaniso.
Yekutengesa Standard Yeyeyeye Tei Kunze Kunze (Yakagamuchirwa neShanghai Tea Kambani muna 1977)
Tea chinhu tiyi kodhi kodhi inoratidzika maitiro
Yakakosha Zhen yakasarudzika giredhi 41022 yakaoma, yakasimba yakatwasuka, ine Miao Feng
Level 1 9371 yakanaka yakasimba, inorema yakasimba
Level 2 9370 yakasimba knot, ichiri inorema yakasimba
Jane tsiye nhanho 9369 rakasimba banga
Chikamu 9368 rakasimba banga
Bhuku 3 9367 rakasununguka zvishoma
Bhuku 4 9366 yakawanda pine
Hapana kirasi 3008 yakasindimara yakasununguka, yakajeka, iine nyore hunde
Mvura tii nhanho 8147 ipfupi yakajeka blunt yakanaka tendons
Super giredhi 8117 nyoro tendon ine mitsetse
Xiu Mei Chikamu I 9400 sheet ine ribhoni
Bhuku II 9376 rakashata
Chikamu 3 9380 chakareruka chidimbu
Tea zvidimbu 34403 mwenje wakanaka Gongxi yakakosha 9377 ruvara kushongedza, yakatenderera hokore chimiro, inorema yakasimba
Chikamu che9899 ruvara ichiri kumhanya, yakatenderera hove chimiro, ichiri inorema yakasimba
Chechipiri giredhi 9417 ruvara zvishoma rwakaoma, hoko yakawanda, mhando mwenje
Level 3 9500 color yakaoma, isina, hoko
Kwete - kirasi 3313 isina mhango yakasununguka, yakati sandara, ipfupi bundu
Kupatsanurwa kwetsiye tii kwakakamurwa kuita huremu hwemuya mumhepo yekumisikidza muchina; Saizi yemuviri wetii inoonekwa maererano nehukuru hwesero yegomba mufurati yakatenderera muchina
Zvayo tii zvigadzirwa zvinosanganisira Dongting Biluochun, Nanjing Yuhua Tea, Jinjiu Huiming, Gaoqiao Yinfeng, Shaoshan Shaofeng, Anhua Songneedle, Guzhangmaojian, Jianghua maojian, Dayong maojian, Xinyang maojian, Guiping Xishan Tea, Lushan Yunwu.
Heino tsananguro pfupi yezvigadzirwa zviviri, senge Dongting Biluochun: kubva kuTaihu Lake muWuxian County, Jiangsu Province, mhando yepamusoro yeBiluochun Mountain. Chimiro chetambo chakanakisa, kunyangwe, chakamoneredzwa kunge hozhwa, pekoe inoburitswa pachena, ruvara rwacho ndere sirivheri-girinhi yakavanzwa cui glossy; Endoplasm kunhuhwirira kusingaperi, ruvara rwemuto rwakasvibira uye rwakajeka, kuravira kwacho kutsva uye kunotapira. Iko pasi pemashizha ari nyoro uye akapfava uye akajeka.
Goridhe mubairo huiming: inogadzirwa mu yunhe county, zhejiang province. Yakatumidzwa zita remenduru yegoridhe kuPanama World Kuratidzwa muna 1915. Chimiro chetambo chakanakisa uye chakatsvinda, iyo Miao show ine yepamusoro, uye ruvara rwakasvibira uye rwunoshongedza. Endoquality kunhuhwirira kwakakwirira uye kunogara, neruva nemichero kunhuwirira, yakajeka uye yakajeka muto sara, inotapira uye inozorodza kuravira, girini yakajeka uye yakajeka mashizha.
China yekutanga "green green preliminary yekugadzira yekuchenesa" yakagadzirwa zvinobudirira
Yakagadzirirwa nedare reAnhui rekurima komiti, yakavakirwa pachirongwa chekutsigira tekinoroji, anhui purofesa wezvekurima yunivhesiti xiao-chun wan weprojekiti nyanzvi nyanzvi yedhipatimendi rezvekurima chirongwa 948 "nzvimbo yekutumira kunze inozivisa tii yekugadzira tekinoroji kuchinjisa uye kugadzirwa kwe" tarisa pane izvo zvemukati zvekutsvaga " pakutanga kwechinyakare girini tii yakachena kugadzirwa ", muna Zvita 6 muHugh zhengning County kuburikidza nebazi rezvekurima nyanzvi kupokana kwesangano.
Iyi tambo yekugadzira ndiyo yekutanga yakachena yekugadzirisa tambo yeiyo yekutanga kugadzirwa kweyakagochwa girini tii iyo inosanganiswa neotomation uye kuenderera yakazvimiririra yakagadzirirwa uye yakavakwa muChina. Zvakachinja mamiriro kuroora muchina kushanda mu China yaivapo tii kugadzirwa, akaziva yose muitiro kuramba kugadzirwa kubva matsva mashizha kuti aome tii, uye akapa yakanaka chikuva kuziva digitaalinen kugadzirwa. Otomatiki ekudzora tekinoroji inogamuchirwa kuti ione iyo dijitari kutonga kweese maitiro ekugadzira. Kubudikidza nekusarudzwa uye kushandiswa kwesimba rakachena, kusarudzwa kwekushambidzika kwekugadzirisa zvinhu, kusvibiswa uye kudzora ruzha, uye nekuvandudzwa kwekugadziriswa kwenzvimbo noutsanana, iko kuchenesa kugadziriswa kwave kuonekwa.
Nyanzvi dzinotora chikamu mukuratidzira dzinobvuma kuti iyi tambo yekugadzira yakachengetedza uye kuendesa kumberi hunhu uye zvakanakira kugadzirisa michina yetsika yedu yekumhanyisa-yakakangwa girini tii, uye yasvika padanho repamberi reyepasi rose yakafanana yekugadzira mutsara pane yakazara dhizaini nhanho, uye danho dhizaini yemimwe michina imwe yakatosvika padanho repasi rose rinotungamira. Kuberekwa kwetambo yekugadzira kunoratidzira kuti iko kwekutanga kugadzirwa kweiyo yakasvibira tii muChina yakanyatsopinda munguva yehutsanana, otomatiki, kuenderera uye kuita kwemajita. Zvichaita chaizvo kuvandudza kubudiswa pamwero China chetsika zvakakangwa girini tii uye kunatsiridza kugona China tii ekisipoti kuwana mari yekunze.
Pashure: GINGER CHUNMEE TI
Zvadaro: GIZA REDU RURE JING